· 10 months ago ·40 Comments
Like – 20K Share – 767
Myo Zaw Aung says:
2021-04-15 at 9:33 AM
Just only we have voice 👍
2021-04-15 at 9:35 AM
Congratulations…Public voice ..our voice
La Min Htet Thar says:
Our Government ‘s channel. Please recommend.
Theingi Win Aung says:
2021-04-15 at 10:19 AM
Congratulations👍🏼👍🏼👍🏼Our people always support to CRPH.
Roko Than says:
2021-04-15 at 11:06 AM
Follow ထားပါပီ. Cant wait ပါ
ေရႊ ထက္ ပိုင္ says:
2021-04-15 at 11:19 AM
Our people always support to CRPH.
Win Naung says:
2021-04-15 at 11:30 AM
Facebook page က Like 20 ကျော်လျှင် page name ကို ပေးလို့ရပါပြီ။ အခုလို ID code တွဲပါနေတဲ့ page name အစား PVTV ဆိုတဲ့ စာလုံးအတိုဖြင့် Page name ပေးဖို့ အကြံပြုအပ်ပါသည်။
Tin Tun Naing says:
2021-04-15 at 11:36 AM
We don’t have weapons We don’t guns We only have voice! Great 👍
Kokhinmaung Win says:
2021-04-15 at 12:00 PM
အခုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေ သတင်းမှန်ရရှိဘို့ အထူးအရေးကြီးပါတယ်..
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီက ပြည်သူတွေကို နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်ကျော် လိမ်လည်ပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့တာမို့ ဆက်လက်ပြီး လိမ်လည်ဘို့ ကြိုးစားမှာဘဲ..
ထို့ကြောင့်မို့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သတင်းမှန်ကို ဖြန့်ချီနိုင်ဘို့ အရေးကြီးပါတယ်..အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုက မဟုတ်မတရား စွတ်စွဲ လိမ်လည်ပြီး
မမှန်ကန်သော သတင်းများ တီဗွီနဲ့ ရေဒီယိုမှ အသံလွှင့်ကြေငြာလျင် ချက်ချင်း ခြေပနိုင်ဘို့ အရေးကြီးပါတယ်..
ဘီဘီစီသတင်းက ဒုတိယကမ်ဘာစစ်မှာ အမှန်ကန်ဆုံး ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး သတင်းဟု ထင်ရှားသွားပါတယ်.. ထို့ကြောင့် ပြည်သူ့အသံ တီဗွီက ဘီဘီစီသတင်းလို ပြည်သူတွေကို မှန်ကန်သော သတင်းကို လွှင့်ပေးဘို့ အရေးကြီးပါတယ်..ပြည်ထောင်စု စစ်တပ်က အနိုင်ရလျှင် အနိုင်ရတဲ့အကြောင်း ရှုံးရလျှင်ရှုံးတဲ့ အကြောင်း မှန်မှန်ကန်ကန် သတင်းပို့ရင် ပြည်သူတွေက ပိုပီးယုံကြည်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်..ပြည်သူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရရှိရင် အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတွေ ပြောတဲ့စကားကို လုံးဝအရေးထားတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး…
Khin Khin Khin says:
2021-04-15 at 12:47 PM
Our people always support to CRPH
2021-04-15 at 1:05 PM
Win Nyunt Mg says:
2021-04-15 at 1:06 PM
Mandalar Myint says:
2021-04-15 at 1:29 PM
Highly recommends! Big Congratulations!
2021-04-15 at 2:22 PM
Welcome our Media we need the truth new and public voice congratulations
Wah Wah Lwin says:
2021-04-15 at 2:29 PM
We are waiting for NUG.
Cherry Wai Cherry Wai says:
Shine De Htet says:
2021-04-15 at 3:04 PM
ထြန္း ေမာင္ ေမာင္ says:
2021-04-15 at 3:24 PM
dvb tv mizzimatv တေွလို psiစက်ကနေ ဖမ်းယူြကည့်လို့ ရအောင် လုပ်ပေးပါ
ဇွန် ပွင့် says:
2021-04-15 at 4:37 PM
2021-04-15 at 6:22 PM
2021-04-15 at 7:36 PM
R2P အမြန်ခေါ်စေချင်ပါတယ် အခြေအနေပိုမစိုးရွားခင် အမြန်ဝင်အောင်ခေါ်ပေးပါ
Myint Myat says:
2021-04-16 at 1:17 PM
We love PVTV.
RO Zin Min says:
2021-04-16 at 1:28 PM
J Khine says:
2021-04-16 at 1:31 PM
Youtubeမှာပါ Channelတစ်ခု တင်နိုင်​အောင်လုပ်​ပေးပါ
Uat Syk says:
2021-04-16 at 1:43 PM
Thi Thi Naing says:
2021-04-16 at 2:04 PM
2021-04-16 at 2:11 PM
Tin Aung says:
2021-04-16 at 2:17 PM
စစ်အာဏာရှင် အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းရေး ခိုင်မာတဲ့ခြေတစ်လှမ်း စတင်နိုင်ပြီမို့
ဒေါ်ကြည်ကြည် ဝင်း says:
2021-04-16 at 3:03 PM
Shwe Yout says:
2021-04-16 at 5:30 PM
ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ႀကိဳဆုိပါတယ္
2021-04-16 at 5:32 PM
2021-04-16 at 6:06 PM
Ý Chînê says:
2021-04-16 at 10:12 PM
လမ္းေဘးက ခ်မ္းေအး says:
2021-04-17 at 11:00 AM
U Soe Thwin says:
2021-06-01 at 9:01 PM
စစ်သင်တန်းတတ်ချင်ပါတယ် သင်တန်းခေါ်ရင်ပြောပေးပါ ကြောက်နေလို့မရတော့ဘူး စစ်သင်တန်းကိုတရားဝင်ခေါ်စေချင်ပါတယ်
Mya Wut says:
2021-06-06 at 10:07 PM
2021-06-25 at 7:19 PM
Sayacinta Kumudar says:
2021-07-24 at 8:00 PM
Public Voice Television (PVTV) သည် ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးလိုလားတောင့်တလျက်ရှိသော ဖ…